» को बन्छ नेपाल स्टारको पहिलो विजेता ?
को बन्छ नेपाल स्टारको पहिलो विजेता ?
१७ माघ २०७७, शनिबार ०९:२९
मकवानपुर, १७ माघ । नेपालको आफ्नै गायन रियालिटी शो ‘वाईवाई नेपाल स्टार’ को पहिलो सिजनको फाईनल भिडन्त यही माघ १७ गते शनिबार हुँदैछ । शनिबार साँझ ५ बजेदेखि नेपाल टेलिभिजन मार्फत फाईनल कार्यक्रम लाईभ प्रसारण हुनेछ । फाईनलमा पुगेका सुरेश लामा, एलिना गुरुङ, लक्ष्मण लिम्बु र सन्देश बम्जन लामाको फाईनल प्रस्तुति निक्कै दमदार हुने दर्शकहरुले अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये एक जनालाई विजेता बनाउन दर्शकहरुले शनिबार साँझ ६ बजे सम्मै भोट गर्न पाउनेछन् । नेपालकै सबैभन्दा बढी पुरस्कारराशीको यस शोको विजेताले नगद ३५ लाख र अन्य फाईनालिष्टहरु प्रत्येकले ५–५ लाख नगद पुरस्कारसहित विभिन्न पुरस्कारहरु प्राप्त गर्नेछन् । नेपाल स्टारको पहिलो विजेता बनेर कसले ईतिहास रच्ला भन्ने विषयमा यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईको विचारमा वाईवाई नेपाल स्टारको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो-
नेपाल स्टारको पहिलो विजेता बन्नसक्ने विभिन्न आधारहरुलाई हेर्ने हो भने चारै जना प्रतियोगीहरु उत्तिकै बलिया देखिएका छन् । बटम थ्रीमा परेका आधारमा हेर्ने हो भने शोमा एकपटक पनि बटम थ्रीमा नपरेका एलिना गुरुङ र लक्ष्मण लिम्बुको नेपाल स्टार बन्ने सम्भावना ठूलो छ । होम भिजिटका समयमा उनीहरुको समर्थनमा देखिएको दर्शकहरुको हुलले पनि त्यो कुराको प्रमाण दिन्छ । पोखरावासीहरु उर्लिएको देख्दा एलिनाको अझै बढी सम्भावना समेत देखिन्छ । अवार्डहरुका आधारमा हेर्ने भने चाहिँ एलिनाको नाममा एउटा मात्र अवार्ड छ । सुरेश लामा, लक्ष्मण लिम्बु र सन्देश बम्जन लामाले समान २–२ वटा अवार्डहरु जितेका छन् । दर्शकहरुले सर्वाधिक हेरेका प्रस्तुतिहरुमा पनि सुरेश र एलिनाकै प्रस्तुति चर्चामा भएकोले यी दुई प्रतियोगीहरुको चर्चा धेरै छ । तर लामो समयसम्म बटम लाईनमा नपरी अन्तिम समयहरुमा मात्र बटम लाईनमा परेका सन्देश बम्जन लामाको प्रशंसकहरुको भिड पनि निक्कै ठूलो छ । उनलाई धरानका वरिष्ठ गायकहरुसम्मको साथ भएकोले सन्देशले पनि नेपाल स्टार जित्ने सम्भावना निक्कै बलियो देखिएको छ । दर्शकहरुको कमेन्ट र निर्णायकहरुको प्रशंसा हेर्ने हो भने वाईवाई नेपाल स्टारको पहिलो विजेता काठमाडौँ तारेभिरका सुरेश लामा बन्नसक्ने बलियो आधारहरु पनि देखिन्छन् । तर उनी लगातार बटम थ्रीमा परेका कारण रिजल्ट कस्तो आउँला भन्ने कुरा शतप्रतिशत अनुमान लाउन सकिने स्थिति छैन ।
सुरेश लामाले उत्कृष्ट ६ छनौटका क्रममा र उत्कृष्ट ४ छनौटका क्रममा गरी दुई पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । उनले उत्कृष्ट ४ छनौट र उत्कृष्ट ७ को छनौटका क्रममा गरी दुई पटक एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै लक्ष्मण लिम्बुले उत्कृष्ट ७ छनौटका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड र उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । एलिना गुरुङले उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् भने सन्देश बम्जन लामाले उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा र उत्कृष्ट ४ छनौटका क्रममा गरी जम्मा २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । सन्देशले उत्कृष्ट ८ छनौटको क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड र उत्कृष्ट ४ को प्रस्तुतिका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए ।